MRT Dongle Review ရေးသားမှု ပြိုင်ပွဲ - MPPG
Home / Uncategorised / MRT Dongle Review ရေးသားမှု ပြိုင်ပွဲ
MRT Dongle Review ရေးသားမှု ပြိုင်ပွဲ
Phyo Nyi Nyi July 20, 2016	Uncategorised 1,117 Views
မိုလ်ဘုိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ရေးနယ်ပယ်တွင် ဖုန်းပြုပြင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် Box များ၊ Dongle များ များစွာ ပေါ်ထွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို Box များ၊
Dongle များကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနုိုင်သူ နည်းပါးခြင်း ၊ ပြည့်စုံစွာရေးသားထားသော Tutorial ပိုစ့်များ နည်းပါးခြင်းတုို့ကြောင့် ကျွန်တော်တုို့ MPPG မှ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင် ဖြည့်စွက်လိုပါသဖြင့်
ယခု ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် ရွေးချယ်ခံရသူသည် –
MRT Dongle တစ်ခု လက်ဆောင် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
* မည်သူမဆုို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နုိုင်ပါသည်။
* ကျား / မ အသက်အရွယ် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
* Tutorial များ ၊ Review ပုိုစ့်များ ရေးသားရန် ဝါသနာပါသူဖြစ်ပါက
*လျှောက်လွှာတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ Review ပိုစ့်သာ ပို့ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
*ကိုယ်တုိုင်ရေးသားသော Review ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုရပါမည်။
* ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရမည်။
MRT Dongle နှင့် ပတ်သတ်၍
– MRT Dongle ဆုိုတာ ဘာလဲ။
– MRT Dongle ကို ဘယ်လိုသုံးလုို့ရသလဲ။
– မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘယ်နေရာတွေမှာ ဝယ်ယူလို့ရမလဲ။
– ဈေးနှုန်း ဘယ်လောက်ပေးရသလဲ။
အစရှိတဲ့ MRT Dongle နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာရေးသားပေးရပါမယ်။
– Microsoft Word Format (.doc, .docx) ဖြင့် ရေးသားပေးပို့ရမည်။
– MPPG Facebook Page ၏ Message Box သို့ ရေးသားပေးပို့ရပါမည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်သူများ၏ ရေးသားထားသော ပိုစ့်များကို MPPG Facebook Page တွင် တင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လူကြိုက်အများဆုံးပိုစ့် (Post Like အများဆုံး ရရှိသူ) ကို
*** အနုိုင်ရရှိသူ ရွေးချယ်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှု
တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက MPPG ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်းသာ
1. MRT Dongle Setup လုပ်ပုံလုပ်နည်း Video Tutorial
2. MRT Dongle အသုံးပြု နည်း Video Tutorial
3. MRT Dongle မှလုပ်ဆောင်နုိုင်သည့် Function များအကြောင်း Tutorial များ ၊ Video များပြုလုပ်ပြီး MPPG သို့ ရေးသားပေးပို့ ရပါမည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် Review ပိုစ့် ပေးပို့သည်နှင့်တပြိုင်နက် အထက်ပါ အချက်(၃)ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ပေးရန် ကတိပြုသည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
အခြား Box များ ၊ Dongle များနှင့် ပတ်သတ်၍ လစဉ် ပြိုင်ပွဲများ
ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Mobile Tutorial ရေးသားရန် ဝါသနာပါသူများ ၊ Review ရေးသားမှုကို ဝါသနာပါသူများကို ကျွန်တော်တုို့ MPPG နှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Previous Download iOS 9.3.3 for iPhone, iPad and iPod touch
Next Huawei Myanmar Region Firmware Update